न्युकासल अब कतातिर ? – Nijgadh News
अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा भव्यरुपमा होली पर्व सम्पन्न
चारकोसे झाडीभित्र गोठजस्तो विद्यालय : ४ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई एउटै कोठा, एउटै शिक्षक
निजगढमा यसरी बन्दै छ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
Home / खेलकुद / न्युकासल अब कतातिर ?
न्युकासल अब कतातिर ?
Nijgadh News April 26, 2017	खेलकुद, प्रवास Leaveacomment 19 Views
एकै दिनमा फुच्चीको एक लाख
राफेल बेनिटेज र न्युकासल युनाइटेड फेरि इङलिस प्रिमियर लिगमा फर्कने भएका छन् । सायद यो सिजन उनीहरूले आफूले सक्दो पनि गर्न सकेनन्, बढुवा पाए पनि । तर महत्त्व तथ्य यो होइन । मुख्य प्रश्न हो– अब न्युकासल कतातिर जानेछ त ? गत सिजन बेनिटेजलाई नयाँ १२ खेलाडीमा लगानी गर्न ५ करोड ५० लाख पाउन्ड दिइएको थियो । यति खर्च गरे पनि न्युकासल फाइदै रह्यो । किनभने उसले पुराना खेलाडी बेचेर नै ८ करोड ५० लाख पाउन्ड कमाएको थियो ।
मार्चभित्र नै न्युकासल प्रिमियर लिग उक्लने अनुमान गरिएको थियो । सकेन । केही समय बढी लाग्यो । तर एउटा तथ्य के पनि हो भने बेनिटेजले न्युकासलका लागि राम्रो काम भने गरे । वर्षको ५० लाख पाउन्डको तलबप्रति उनले न्याय गरे । पछिल्ला पाँच सिजन फर्केर हेर्ने हो भने रेलिगेसनमा परेर तुरुन्तै माथि उक्लने एउटै टिम रहेको छ, बर्नली । सबैलाई थाहा छ, अहिले इङलिस फुटबलको दोस्रो डिभिजन च्याम्पियनसिप लिग धेरै बलियो भएको छ ।
खेलाडी धेरै राम्रा छन् । राम्रा व्यवस्थापक पनि उत्तिकै छन् । बढुवा पाउनुको पछाडि उसको घरेलु मैदान सेन्ट जेम्स पार्क पनि निर्णायकजस्तै रह्यो । यो सिजन उसले खेलेका प्रत्येक खेलमा पूरा ५२ हजार दर्शक हुन्थे र यो सानो तथा कमजोर टिमका लागि कप फाइनलभन्दा कम हुन्नथ्यो । यही कारणले विपक्षी टिम न्युकासलमा आएर खेल्दा बढी रक्षात्मक पनि भए । यही कारणले गर्दा न्युकासललाई आक्रामक भएर खेल्न सजिलो पनि भयो ।
अहिले न्युकासल माइक एस्लीको स्वामित्वमा छ । क्लबको स्रोतले के पनि भन्छ भने पछिल्लो समय न्युकासल किन्नमा रूचि देखाउने अगाडि आएका छन् । त्यसैले केही दिनपछि न्युकासल बेचिएको समाचार आउन सक्छ । सम्भावित क्रेता ? कतारका धनाढय ? वा चिनियाँ लगानी ? नयाँ लगानीकर्ताको रूचि न्युकासलको घरेलु मैदानमा उपस्थित हुने दर्शकको बाक्लो संख्या पनि हुनसक्छ । यही कारण देखाएर एस्लीले न्युकासलको भाउ पनि बढाउन सक्छन् ।
त्यो भन्दा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न के पनि हुन सक्छ भने व्यवस्थापकका रूपमा लिभरपुल र रियल म्याड्रिडका पूर्व प्रशिक्षक बेनिटेज न्युकासलमै रहने छन् वा छैनन् त ? जनवरीमा एस्लीले नयाँ खेलाडी किन्न पैसा दिन नमानेपछि बेनिटेजले आउने सिजनमा आफू अन्यतिरै जान सक्ने अनुमान पनि फ्याँकेका थिए । बेनिटेजको योग्यताअनुसार उनलाई अरु प्रिमियर क्लबले रूचि नदेखाउने पनि होइन । सम्भवत: वेस्ट ह्याम यसमा बढी उत्सुक छ ।
पछिल्लो समय न्युकासल क्लब स्वयं र यसका समर्थकप्रति बेनिटेजको माया बढेको देखिएको छ । त्यसैले पनि उनी सेन्ट जेम्स पार्कमै रहन सक्छन् । सायद अबको सिजन उनको नेतृत्वमा न्युकालसले कुनै उपाधि जित्न सक्छ । अनि न्युकासल फेरि युरोपेली च्याम्पियन्स लिगका लागि छनोट पनि हुनसक्छ ।
तर आफ्ना लागि स्थितिअनुकूल छैन भने बेनिटेज न्युकासलमा नबस्न पनि सक्छन् । यी सबै प्रश्नको उत्तर न्युकासल क्लबको भविष्यका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । –द गार्डियन
Previous उत्तर कोरियाले ठूलो मात्रामा तोपहरु तयारी अवस्थामा राखेको दक्षिण को आरोप
Next गायिकाहरूको ड्रेस सेन्स
साउदर्न हाईलाण्डमा भव्य तिज धमाका सम्पन्न (फोटो फिचर)
१७ अगस्त,२०१७ – अस्ट्रेलियाको सिड्नीको दक्षिण भेगमा पर्ने सानो तर रमणिय स्थल साउदर्न हाईलाण्डमा भव्य तिज …